Factory and Industrial Plant - Myanmar Builders Guide
Saturday, 16 November 2019 10:21
Yoma Group တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၂၃၇. ၅ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ဖိလစ်ပိုင် ကုမ္ပဏီ
ဖိလစ်ပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Ayala က Yoma Group တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃၇ ဒဿမ ၅ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Thursday, 14 November 2019 11:10
နွေရာသီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းသစ် (၇)ခု အကောင်အထည်ဖော်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နွေရာသီတွင် တိုးတက်သုံးစွဲလာမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်ကို အချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းအသစ် ခုနစ်ခုအား အကောင်အထည်ဖော်နေကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး (လျှပ်စစ်) ဦးခင်မောင်ဝင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ ပိတ်သိမ်းသွားသော စက်ရုံများ ပဲခူးစက်မှုဇုန်တွင် ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ရန် လာရောက်ကမ်းလှမ်း
ပဲခူးမြို့ ရပ်ကွက်ကြီး (၈) နှင့်ရပ်ကွက်ကြီး (၉) တို့တွင် ပဲခူးပြည်တွင်းပြည်ပစက်မှုဇုန်ကို ယခင်အစိုးရလက်ထက်၂၀၁၃ ခုနှစ်က စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ စက်ရုံပေါင်း ၄၂ ရုံ လည်ပတ်နေကာ အလုပ်သမားရှစ်သောင်းခန့်ကို အလုပ်အကိုင်ပေးထားနိုင်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ ပိတ်သိမ်းသွားသောစက်ရုံများပါ ပဲခူးစက်မှုဇုန်တွင် ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ရန် လာရောက်ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း သိရသည်။
Friday, 08 November 2019 14:16
မြန်မာ-ကိုရီးယား စီးပွားရေးပူးပေါင်းမှု စက်မှုဇုန်စီမံကိန်းနှစ်ခု လက်ရှိတွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်နေပြီဖြစ်
မြန်မာ-ကိုရီးယား စီးပွားရေးပူးပေါင်း မှုစက်မှုဇုန်စီမံကိန်းနှစ်ခုကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀ နီးပါးဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းထူထောင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC က ခွင့်ပြုပေးထားပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ သိရသည်။
Thursday, 07 November 2019 15:03
ပန်းတနော် တွင် တန်ချိန် ၁၀၀၀ ထွက် ငါးအစာစက်ရုံ စတင်တည်ဆောက်
မြန်မာပြည်တွင်သာမက အာရှ၏ အကြီးမားဆုံး ဧက ၉၀၀ ရှိ ငါးမွေးမြူရေး ထုတ်လုပ်ရေးဇုန်တွင် တန်ချိန် ၁၀၀၀ ထွက် ငါးအစာစက်ရုံ တည်ဆောက်ရန် ပိုင်တိုင်ရိုက်သွင်းခြင်း အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်က ဝါးခယ်မ-ရွှေ လောင်းကားလမ်းမကြီး (၁၇ မိုင်၊ ၆ ဖာ လုံ)နှင့်ကပ်လျက်တွင်တည်ဆောက်ထား သည့် ငါးမွေးမြူထုတ်လုပ်ရေးဇုန်ကြီး တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Thursday, 07 November 2019 14:02
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းတွင် ဂျပန်က လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ Chemical plant နှင့် Steel plant တို့လုပ်ကိုင်ရန်စိတ်ဝင်စား
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း တွင် ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် လျှပ်စစ်ထုတ် လုပ်သည့်စက်ရုံ၊ Chemical plant၊ Steel plant တို့ကို လုပ်ကိုင်ရန် စိတ် ဝင်စားမှုရှိကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန် ကြီး ဦးအောင်ထူးက ပြောကြားခဲ့သည်။
Wednesday, 06 November 2019 15:32
ဂျပန်နိုင်ငံက ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် အပါအဝင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ကိုင်ရန် စိတ်ဝင်စားနေပြီး စီမံကိန်းဆိုင်ရာစာတမ်း တစ်ခု ပြုလုပ်ထားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယဝန်ကြီးပြောကြား
ဂျပန်နိုင်ငံက ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်အပါအဝင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် စိတ်ဝင်စားနေပြီး စီမံကိန်းဆိုင်ရာစာ တမ်းတစ်ခု ပြုလုပ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးက ပြောကြားသည်။
Tuesday, 05 November 2019 11:09
ထားဝယ် SEZ အပါအဝင် တနင်္သာရီတိုင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဂျပန်နိုင်ငံက စစ်တမ်းတစ်ခု ပြုလုပ်နေ
ထားဝယ်အထူးစီးပွား ရေးဇုန် စီမံကိန်း အပါအဝင် တနင်္သာရီတိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန် ဂျပန် နိုင်ငံက စစ်တမ်းတစ်ခုပြုလုပ်နေ ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိ ယဝန်ကြီးဦးအောင်ထူးက ပြော ကြားသည်။
Saturday, 02 November 2019 13:27
မော်တော်ကားဈေးကွက် သာမက နိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက် စေမည့် အရေးပါသည့် ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုအဖြစ် တိုယိုတာကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံ သီလဝါအထူးစီးပွား ရေးဇုန်တွင် နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်၌ စက်ရုံစတင်ဆောက်လုပ်ပြီ ဖြစ် ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုုင်ရာဂျပန် သံအမတ်က ပြောသည်။
Strong Co., Ltd.
Together Myanmar Co., Ltd.
Dana Shwe Nann